နိုဝင်ဘာ 2019 | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
လများ: နိုဝင်ဘာလ 2019
Tranzon’da Belediye Otobüslerinde Dezenfekte Mesaisi ; Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren otobüslerin iç ve dış temizlikleri her gün rutin olarak yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun talimatı [ပို ... ]
စက်ဘီးဖြင့်ကျောင်းတက်နေသောကလေးများမှအဓိပ္ပါယ်ရှိသောသတင်းစကား! 'ဓာတ်ဆီမသုံးပါနဲ့၊ ဆီလောင်ပါစေ'; İzmir Metropolitan မြူနီစီပယ်က၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ Mavişehir Eraslan ကောလိပ်၏ကျောင်းသားများပြီးနောက် Karşıyaka Evin Leblebicioğlu Ortaokulu öğrencileri de [ပို ... ]
TCDD စက်ပြင်သင်တန်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2018 သည် TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အထူးစိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိခြင်းသည်စက်ပြင်သင်တန်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu açıklanan TÜİK rakamlarına dair açıklamada bulundu. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ağustos [ပို ... ]
Vatman ကဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်လာရမလဲ။ : မြို့ပြခရီးသည်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်အသုံးပြုသောခရီးသည်တင်ယာဉ်များ၊ လမ်းပေါ်တွင်ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလည်ပတ်ခြင်းမပြုရသောအထူးရထားလမ်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုသောရထားလမ်း။ [ပို ... ]
Tarihte Bugün 16 Kasım 1898 Bulgar İşletme Şirketi ile Şark Demiryolları Şirketi’nin yaptığı anlaşma ile Sarımbey’de Yanbolu’ya uzanan hattın işletmesi Bulgarlara kiralandı. 16 Kasım 1919 Heyet-i Temsiliye, Harbiye Nazırı Cemal [ပို ... ]
တူရကီမြေအောက်ရထား, တူရကီအတွက်တူရကီ၏မြို့တော်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်မြေအောက်ရထားစနစ်။ Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ် EGO အထွေထွေညွှန်ကြားမှုကလည်ပတ်သည်။ Metro ပထမ ဦး စွာ 28 ဒီဇင်ဘာ 1997 ကို Red Crescent Batıkentလမ်းကြောင်းပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ လခြမ်းနီ Cayyolu [ပို ... ]
အအေးခန်းတွင်ခရီးသည်များအားစောင့်ဆိုင်းရန်ပွင့်လင်းမြင်သာသောအခန်း။ ; ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်arasındaအစီအစဉ်၏အရေးအပါဆုံးနိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးကိစ္စများအနက်မှအချို့အတွက်ပါးစပ်ဖောင်းပွသောအလုပ်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်…ကျွန်တော်တို့ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာနေ့စဉ် 300 ဟာခရီးသည်တစ်ထောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ် [ပို ... ]